कथा Archives - Page2of5- A complete Nepali news portal based on news & views
भष्मासुरले लखेट्दा महादेवलाई विष्णुले बचाएको ठाउँ ‘ बिशंखु नारायण ’ संग जोडिएको आख्यान यस्तो छ –
११ मंसिर २०७७, बिहीबार २०:५४ November 26, 2020 Buddha Sharan
काठमाडौँ उपत्यकाका चार नाराएण मध्य एक बिशंखु नारायण देवस्थल बाँडेगाऊँ बात हिडेर करिव एक घण्टा दक्षिण गोदाम चौर डाँडाको खोचमा अवस्थित रहेको छ। ललितपुर सातदोवाटो बात गोदावरीको बाटो भएर सवारी साधनबात २५ मिनेटमा नै सजिलै पुग्न सकिन्छ। नेपाल भाषमा विशं भन्नाले विष्णु र खु को अर्थ नदि हो। नदि छेउमा अवस्थित भगवान विष्णु नै कालान्तरमा […]
९ कार्तिक २०७७, आईतवार १३:४० October 25, 2020 Buddha Sharan
दक्षिणकाली मन्दिर दुइनदि होडकु र कोडकु नदीको दोभानमा ५६ हेक्टर क्षेत्रफ़लमा नागले ओढाइएको अवस्थामा स्थापित रहेको छ। मत्स्य ,मास ,मदिरा ,मुद्रा ,मैथुन र पशुवलीलाइ पञ्चमकार तन्त्र योग पद्दतिको स्वछन्द प्रवृतिलाइ स्वीकार गरि स्थापित दक्षिणकालीलाइ शाह वंशीय राजाले समेत कुलदेवताका रुपमा लिएका थिए। अन्य योग शिद्धिले यौनलाइ दबाउन वा त्याग्ने मार्ग बताएको छ तर दक्षिणकाली तन्त्र […]
खाडीको सन्देश: भाग-२
१८ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:४२ September 3, 2020 Nonstop Khabar
(पढाइमा निकै अल्छी गर्ने प्रतीक घरको समस्याले वैदेशिक यात्रामा निस्किएको छ। आफ्नै घर नजिकका राजन दाइसँग उ दुबईको एक सहरमा गयो। उसलाई कम्पनीमा एकजना नेपालीलाई जिम्मा लगाएर राजन त्यहाँबाट निस्किएकाे छ । राजनले भेटाएकाे नेपालीले प्रतीकलाइ बस्ने ठाउँ देखाएर फर्किन्छ । काममा गएका नेपाली दाजुभाइहरु फर्किएपछि राजन एक दलाल हुन र यहाँ नेपालीले के के […]
खाडीको सन्देश (भाग १)
८ भाद्र २०७७, सोमबार २३:५६ August 24, 2020 Nonstop Khabar
बच्चा बेलामा कसैले सबैभन्दा गाह्रो काम के हो प्रतीक ? भनेर सोध्यो भने म फ्याट्टै जवाफ दिन्थेँ, ‘पढ्नु नपरे हुन्थ्यो ।’ विभिन्न बाहाना, घरको दबाब र गाली सुन्दै स्कूल गयो । स्कूल हिँड्ने बेला घर फर्किने समय आउला र भन्ने लाग्थ्यो। स्कूल पुगेपछि गृहकार्य पूरा नहुँदा फेरि सरको कुटाइ। रातो भएका हात लुकाउँदै सरसँग रिसाउँदै […]
जिन्दगीको जंगलमा हराइरहेका मधुको मुटु छुने कथा
५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ११:१४ February 19, 2020 Nonstop Khabar
‘चार दिनसम्म पानी मात्र खाएर पनि बाँचिदोरहेछ सर ।’ रानीवनको छेउमा एक बिहान उनले मसँग भने । फेरि थपे, ‘जीवन साँच्चै रबर हो । निक्कै चाम्रो छ ।’ उनी अर्थात खेल क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान निर्माण गरिसकेका गुरु तथा प्रशिक्षक मधु लामा । अचेल कहिलेकाही आफ्नै विगततिर फर्कदा गम खान्छन् । उनी आफ्नो अतित् सम्झन्छन् […]
आमा म त्यो बोर्डिङ स्कूलमा पनि पढ्दिनँ
२० कार्तिक २०७६, बुधबार ११:४६ November 6, 2019 Nonstop Khabar
सुयोगः बुवा एउटा पेन्सिल कटर किनिदिनुहोस् न, पेन्सिल तिखार्न चाहियो। वाग्ले सरः ऊ त्यहाँ चक्कु छ, त्यही चक्कुले तिखार न। सुयोग मुख खुम्चाउँदै सुस्तरी भन्छ,‘सधैं यही भन्नुहुन्छ’। वाग्ले सरः के रे अहिले बढी बोल्दा गालामा थप्पड लगाइदिन्छु, जा उता आमासित गएर बस्। सुयोग निन्याउँरो मुख लगाउँदै हातमा कपीकलम लिएर भान्छाकोठामा जान्छ। वाग्ले सर भने आँखा […]
१९ आश्विन २०७६, आईतवार ०१:१५ November 17, 2020 Nonstop Khabar
त्यो रात्रि पनि सधैंको जस्तो साधारण रात्रि थियो। अन्धकारमा मानिसको लोक थाकेर मरेको– चिसो, जाडोले कठाङ्ग्रिएको। काजलको आकाशमा एकनाससँग सलमा सितारा झल्केका हेरिदिने कोही छैन। घरघरमा बत्ती निभेका छन्, ढोकाझ्याल टम्म छन्। सून्य सडकका खामामा बत्ती घोरिएर भुइँतिर हेरिरहेका छन् र तिनको टल्कोमा बन्न लागेको पातलो हुस्सु रात्रिको निःश्वासजस्तो बत्तीबत्तीमुनि झुन्डिएर अडिरहेको छ। निष्पट्ट शान्ति […]
देवकोटाको बहुचर्चित निबन्धः के नेपाल सानो छ ?
१८ आश्विन २०७६, शनिबार २०:५५ October 30, 2020 Nonstop Khabar
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘के नेपाल सानो छ ?’ निबन्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी संकायको स्नातक तहमा पढाइ हुन्छ । लक्ष्मी निबन्ध संग्रहमा संकलित यो निबन्धमा देवकोटाले विश्वप्रसिद्ध लेखक, कलाकार, दार्शनिक, संगीतकार, खेलाडी आदि व्यक्तिहरुको नाम प्रयोग गरेका छन् । निबन्धगत सौन्दर्य र भावलाई सघन बनाउन यस्ता नामहरुले निकै सहयोग पु¥याएको पाइन्छ । यस्ताे छ महाकवि देवकाेटाकाे […]
१७ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०९:३७ October 5, 2019 Nonstop Khabar
१) स्त्री शक्ति एकादेशमा एक अति बलिष्ट, बुद्धिमान र सुन्दर युवक थियो। उक्त युवकसँग सबैजना आकर्षित हुन्थे।शक्तिशाली र घरानिया स्त्रीहरु समेत उक्त युवकको निम्ति मरिहत्ते गर्थे। मानै युवक लाखौको सपनाको राजकुमार थियो। एक कान दुई कान मैदान हुँदै उक्त युवकको चर्चा राज दरबारसम्म पनि पुग्यो। उतिखेर उक्त देशकी रानी पनि पूर्ण यौवनले भरिएकी असाध्य सुन्दरी […]
९ आश्विन २०७६, बिहीबार १५:०९ September 26, 2019 Sangeeta Aryal
काठमाडौँ, ९ असोज । ‘बेवारिसे लाशलाई लुछिलुछी खाँन्छन् गिद्धहरुले, तर मेरो लास बेवारिसे होइन, मेरो आमा छिन् र बा पनि’, काठमाडौँको अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरको प्रेक्षालयमा आवाज गुञ्जिन्छ । चकमन्न थिएटरको अँध्यारो कोठामा भरिभराउ दर्शकको मन सिरिङ्ग पार्नेगरी आएको दृश्यसहितको आवजलेनै बोलिरहेको थियो कारुणिक कथा । सन् १९३१ मा भारतको मध्यप्रदेशमा जन्मेकी मन्नु भण्डारीले सन् १९७९ […]